डिप्रे’सन र यसको लक्षणहरू के हो, आत्मह’त्याका विचारहरू किन आउँछन्? – Jagaran Nepal
डिप्रे’सन र यसको लक्षणहरू के हो, आत्मह’त्याका विचारहरू किन आउँछन्?
बलिउड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतको निधनले सबैलाई चकित पारेको छ। सबैको दिमागमा एउटा मात्र प्रश्न छ कि 34 वर्ष पुरानो सुशांतले कस्तो पीडा भोगिरहेका थिए जसको कारण उनले आत्मह’त्या जस्ता कदम उठाए। प्रहरीका अनुसार सुशांत डिप्रे’सनमा थिए र पछिल्लो6महिनादेखि उनको उपचार चलिरहेको थियो। आखिर, के कारण डिप्रेसन हो जुन एक व्यक्तिले आत्मह’त्या सम्म सोच्न थाल्छ र हामी यसलाई कसरी चिन्न सक्छौं।
डि’प्रेसन मानसिक विकार हो जुन ग’म्भीर मानसिक रोग हो। यसमा, व्यक्ति उदासिन रहन्छ र नकारात्मक विचारहरू सँधै उसको दिमागमा आउँदछन्। धेरै पटक एक व्यक्ति परिस्थितिको सामु यति असहाय महसुस गर्दछ कि उसले आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्ने बारे सोच्न थाल्छ। डि’प्रेसनले बिरामी मानिसलाई सामान्य जीवन बिताउन गाह्रो बनाउँछ।
डिप्रेसन र यसको लक्षणहरू के हो, आत्मह’त्याका विचारहरू किन आउँछन्? डिप्रेसनले मानसिक मात्र होइन शारीरिक पनि हानि पुर्‍याउँछ। पुरुष, महिला र बच्चाहरूमा फरक लक्षण हुन सक्छ, तर डिप्रेसनको प्रत्येक बिरामीलाई कुनै परिस्थितिमा फन्दा र एक्लो महसुस हुन्छ। जनवरीमा डब्लुएचओको एक रिपोर्ट अनुसार विश्वभर करिब 26 करोड मानिस डि’प्रेसनको सामना गर्दैछन।
डिप्रेसनका थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्। यदि परिवारमा कोही पहिले नै डिप्रेसनमा थियो भने, बाल्यकालमा दु’र्घ’ट’ना भयो, मस्तिष्क संरचना, चिकित्सा अवस्था, ला’गू’प’दा’र्थ’को बानी, नजिकको मृ’त्यु, सम्बन्धमा समस्या, उचित चीजहरूको अभाव, जागिरमा समस्या,वजन, घनिष्ठ मित्र वा आफन्तको मृ’त्यु वा उनीहरूको अचानक हराएको जस्ता घटनाहरूले व्यक्तिलाई डि’प्रेसनमा पुर्‍याउँछ।
डि’प्रेसनका लक्षणहरू के के हुन्? डिप्रेसनको कारण, व्यक्तित्वमा परिवर्तनका धेरै प्रकारहरू सुरु हुन्छन्। सबै समय अस्वस्थ र असहाय महसुस गर्दै, क्रोधित, चिडचिलो, मुड डिसअर्डर, निद्रा एपनिया, नकारात्मक विचारहरू, उदास महसुस, कुनै पनि काममा रुचि नभएको महसुस, अत्यधिक थकान, यौ’न चाहनाको कमी र पूर्ण समय टाउको दुखाइ डिप्रेसनको साधारण लक्षण हो।
जब व्यक्ति अत्यधिक त’नावमा हुन्छ, डिप्रेसनको व्यक्तिमा आत्महत्याका विचारहरू आउन थाल्छन्। केहि अवस्थाहरूमा यी विचारहरू आउँदछन् र जान्छन् तर केहि अवस्थाहरूमा यी विचारहरू यत्तिको प्रभुत्वमा पर्दछन् कि उनीहरू आफ्नो ज्यान लिन्छन्। डब्ल्यूएचओको रिपोर्टका अनुसार प्रत्येक वर्ष 800000 मानिसहरूले उदासिनताको कारण आफ्नो ज्यान गुमाउँछन्।
यसको उपचार के हो? अधिकांश व्यक्ति कुनै मानसिक समस्यालाई रोग मान्दैनन् र डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नबाट जोगिछन्। यो नै कारण हो कि डिप्रेसनको समस्या बच्चाहरू देखि बुढेसकालमा छिटो फैलदै छ। जब निरन्तर न’कारात्मक र आफैलाई चोट पुर्‍याउने विचारहरू छन्, तब एक चिकित्सकले तुरून्त सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। यस बाहेक, तपाईंले आफ्नो समस्याको बारेमा आफ्नो नजिकका साथीहरू वा परिवारका सदस्यहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ।
डिप्रेसनबाट पीडित व्यक्ति एक्लो हुनु हुँदैन। यस समयमा सामान्य व्यक्ति समेत कहिलेकाँही लकडाउनमा आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाउँदैछ। यस्तो अवस्थामा, यो समय डिप्रेसनबाट पीडित व्यक्तिलाई चुनौती भन्दा कम होइन। तपाईका साथी र परिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुहोस्, तपाईका समस्याहरू छलफल गर्नुहोस् र उनीहरूसँग खुल्लमखुल्ला मद्दत लिनुहोस्।
एकाकीपनबाट बच्न, पुस्तकहरू पढ्नुहोस्, योग गर्नुहोस्, राम्रोसँग सुत्नुहोस्, रक्सी र ला’गू’औ’ष’धको सेवनबाट जोगिनुहोस्। यदि तपाईं कुनै मानसिक समस्याको साथ संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ जसको बारेमा तपाईं कसैसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने, त्यसपछि कुराकानी गर्ने उपचारको खोजी गर्नुहोस् र मनोचिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।